Dhagaxa Peridot waxaa badanaa loo isticmaalaa sida dahabka: fardaha, silsiladda, jijinka - fiidiyaha
Ka iibso dukaannada dabiiciga ah dabiiciga ah dukaankeena
Dhagaxa Peridot waa olivine tayo wanaagsan leh. Waa macdanta silicate oo badanaa annaga noo ah sida dahabka loo yaqaan 'peridot gemstone dahabka': hilqado, silsilad, jijin…
Waa macdanta silicate oo leh qaaciddada (Mg, Fe) 2SiO4. Sida peridot waa magnesium hodanka ku ah kala duwan ee olivine (forsterite). Waxay had iyo jeer annaga noo tahay sida dahabka dahabka loo jecel yahay: hilqado, silsilad, jijin.
Peridot waa mid ka mid ah muraayadaha yar ee ku dhaca hal midab oo kaliya: midab-cagaaran. Xoogga iyo caanaha cagaaran, si kastaba ha ahaatee, waxay kuxirantahay boqolkiiba birta ee dhismaha macdanta. Sidaa awgeed midabka alaabta shakhsi ahaaneed wuxuu ku kala duwanaan karaa jaalaha, ilaa saytuunka, ilaa cagaarka-cagaaran. Xaalado dhif ah, waxay ku dhici kartaa dhexdhexaad ah mugdi ah, oo cagaaran oo muuqaal leh oo aan lahayn hurdiga labaad ee huruudka ah ama maskaha buniga.
Olivine guud ahaan waa macdan aad u ballaaran, laakiin tayada gaaska waa mid aad u yar. Tani waxay sabab u tahay xasaasiyadda kiimikada ee macdanta dhulka. Waxaan caadi ahaan helnaa olivine sida miro yar. Oo waxay u egtahay in ay ku jirto xaalad aad u cakiran, oo aan ku habbooneyn isticmaalka qurxinta. Cabbitaannada waaweyn ee forsterite, noocyada badanaa inta badan loo isticmaalo in la gooyo alaabtamida peridot, waa dhif; natiijada olivine waxaa loo tixgeliyaa inay tahay qaali
Peridot wuxuu leeyahay taariikh aad u dheer. Papyri-da hore wuxuu qorayaa dhagxaan dhagaxyada sida ugu dhaqsaha badan 1500 BC. Ilaha ugu muhiimsan ee dunidan qadiimka ah waxay ahayd Topazo Island (hadda Zabargad ama St. John's Island) ee Badda Cas ee Masar. Waqtiyadii hore, dhagaxyo ayaa sidoo kale loo isticmaalay taliyayaasha. Jasiiradaha jasiiradda waxaa lagu qasbay inay soo ururiyaan alaabtii mulkiilaha Fircoon. Halyay kale ayaa sheegay in ilaaliyeyaasha xaasidnimada ah ee amar ku bixiyay in ay dilaan qof kasta oo gardaro ah ilaaliya jasiiradda oo dhan. Sheekadu waxay sii socotaa in macdaneydu ay shaqeeyeen maalintii iyo habeenkii. Waxaan ka heli karnaa alaabteeda ka dib habeenkii sababtoo ah iftiinkooda. Dhalinyaradu waxay meesha ku calaamadeeyn doonaan habeenkii si ay dib ugu soo celiyaan maalinta xigta.
Sidaa daraadeed, cutubka ugu wayni waa xayawaanka 310 (62 g) oo lagu soo bandhigay Matxafka Smithsonian ee Washington, DC
HABDHISKA: (MgFe) 2SiO4
MIDABKA: cagaaran oo huruud
Index Refractive: 1.65 in 1.69
BIREFRINGENCE: 0.035 in 0.038
Cuf gaar ah: 3.34
Mohs engegnaantiinna aawadeed, 6.5 in 7
Peridot bogsashada guryaha
Dhalashada dhalasho ee Agoosto.
Peridot ayaa la sheegay inuu ka caawiyo qofka inuu raaco waxa ay jeceshahay, si uu ugu ahaado qalbigaaga iyo waxa aad rabto.
Waa dhagax kaa caawin doona inaad horay u dhaqaaqdo oo aad sii dayso wixii la soo dhaafay. Haddaad jeceshahay inaad horay u socoto, waa inaad iska dhaaftaa wixii dayacaad ah ee wixii hore.
Tani waa dhagxaanta lagu xidhayo si kor loogu qaado fursadahaaga riyadaada ka dhigto mid run ah.
Waxay kordhineysaa awoodaada waxayna kaa dhigeysaa inaad ogaatid waxa aad ka fikirto. Sida aan wada ognahay fikradaheena waxay abuuraan ficilkeena Waxay kaa caawineysaa inaad masuul ka noqotid noloshaada.
Waxay ku xiran tahay wadnaha chakra.
Dhalxaani waxay kor u qaadeysaa kororka. Waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay dadka ay ku adag tahay inay helaan. Waxaa loo sheegay inay ka caawiso kuwa wax hela inuu si dabiici ah oo mahadnaq leh ku helo. Tani waxay u noqon doontaa dhagax fiican dadkayaga ku fududa inay wax bixiyaan laakiin ay ku adag tahay aqbalaadda nimcooyinka ama hadiyadaha dadka kale.
Peridot waxay kor u qaaddaa caannimada. Tani waa dhagxaan fiican dhammaan dadka doonaya inay goobjoog ka noqdaan iftiinka bulshada. Peridot sidoo kale waxay muujisaa xoog iyo tamar sidoo kale. Kuwani waa tayada qofkastoo caan ah u baahan doono.
Xirashada silsilad leh dhagax bir ah oo loo yaqaan 'peridot Stone' ayaa la rumeysan yahay inuu ka dhigo qofka wejiga ku faraxsan oo rajo wanaagsan. Waxaa loo sheegay gemstone-kan inuu baabiin doono dhammaan noocyada masayrka iyo masayrka.
Quruxleydan ayaa sidoo kale lagu xantaa inay ka fogaato riyada. Xaaladdan oo kale waa in dhagaxa alwaax la dhigaa lagu hayaa goobtaada habeenkii. Uma baahnid dhagax-qururuhu sariirtaada habeenkii, laakiin sida ugu dhow sariirtaada ugu macquulsan.
Peridot, ka Mondulkiri, Cambodia
cirbadaha Ludwigite-vonsenite in Peridot
Tags Cambodia, Green, Pailin, Safayr
Dhagaxyo ka Cambodia
Tags Cambodia, dhagax